i-CSA iqoka u-Ottis Gibson njengomqeqeshi wama-Proteas
Namhlanje i-Cricket South Africa imemezele ukuqokwa kuka-Ottis Gibson njengomqeqeshi wama-Standard Bank Proteas kuwona wonke ama-format. Ikontilaki yakhe isuka phakathi kwa-September uma eselungisela iqembu nge-series yasekhaya bedlala ne-Bangladesh kuze kuphele i-ICC World Cup phakathi kwa-2019.
i-CSA iphinde yamemezela ukuthi u-Russell Domingo umqeqeshi we-South Africa A bese u-Shukri Conrad uzophindela emsebenzini wakhe njengomqeqeshi we-Powerade National Academy.
u-Gibson usangumqeqeshi wokuphosa kwiqembu le-England lama-Test futhi kade engumqeqeshi we-West Indies.
Njengomdlali u-Gibson oneminyaka engu-48, waba nomsebenzi omuhle e-West Indies, edlalela bona kwimidlalo emibili yama-Test – owesibili wakuyi-New York Test e-Newlands ngo-1999 – kanye nama-ODI angu-15 njengomdlali okwenza konke phakathi kuka-1995 no-1999. Ngaphezu kwalokho, wadlala imidlalo edlulile ku-400, wadlalela i-Barbados, kuwona wonke ama-format okubalwa khona i-Border, i-Gauteng ne-Northern Cape (i-Griqualand West) kanye namanye amaqembu e-England.
Okugqamile kumsebenzi wakhe ukuthola wonke ama-wicket ayishumi kwi-innings kwi-Durham bedlala ne-Hampshire ngo-2007.
“Emuva kohlelo olunzima, siyathokoza ukwamukela u-Ottis Gibson njengomqeqeshi omusha wama-Proteas,” kuphawula i-CSA Chief Executive, u-Haroon Lorgat.
“Imininingwane yakhe yokudlala kanye nokuqeqesha iyancomeka futhi lokho kuzobeka ama-Proteas ezandleni ezinhle njengoba sibheke kwihlobo elikhulu sizovakashelwa i-India ne-Australia.”
“Njengoba achitha isikhathi esiningi edlala e-South Africa, u-Ottis ulijwayele izwe lakhe futhi lokho kuzomusiza ukusheshe akhululeke neqembu lethu.”
“Ngakwi-Board, ngithanda ukubonga u-Russell Domingo ngomthelela wakhe omuhle ngesikhathi sakhe nama-Proteas futhi ngiyathokoza ukuthi uzoqhubeka nathi njengomqeqeshi we-South Africa A. Indawo ebalulekile le elungisa abadlali bethu abakhulayo kwisigaba sabo esilandelayo ekubeni umdlali wama-Proteas.”
“Kumele ngiphinde ngibonge i-England and Wales Cricket Board ngokuzwa kwabo kanye nokuvuma ekukhululeni u-Ottis kwikontileka yakhe,” esho evala u-Mr Lorgat.
u-Gibson ephawula: “Kuyangijabulisa ukuqala uhambo olusha kumsebenzi wami futhi ngithanda ukubonga i-Cricket South Africa ngokunginika lelithuba kanye ne-England ne-Wales Cricket Board ngokwazi isimo sami. Ngachitha isikhathi esiningi esimnandi e-South Africa njengomdlali futhi manje ngibheke ekubuyeleni njengomqeqeshi.”
i-CSA President u-Chris Nenzani uphawule wathi: “Kunginika ukuthokoza okukhulu ukuhalalisela u-Ottis ngokuqokwa kwakhe kanye nokumngenisa. Nginemicabango emihle ngalokhu ngemidlalo yakhe yase-Border njengomdlali. i-CSA inelisekile ukuthi ukukhethwa bekujulile, kunzima futhi umqeqeshi omusha uhambelana kahle nezidingo kanye nezinhlelo zeqembu lezwe, izinhlelo ze-CSA kanye nezwe. Uhlelo olude belungagqemeki futhi bengingathanda ukubonga wonke umuntu ngokuqonda kwabo kanye nosizo okubalwa khona abakhethayo abaluleke i-Board.”
-Moeen Ali uphosela i-England ukuthi inqobe i-series Ama-Proteas ahlala egxilile ekuqedeni kahle uhambo Maharaj uhamba phambili ekubekeni i-England phansi Ama-Proteas azimisele ekugcineni irekhodi elincomekayo u-Philander ubeka isonto ‘elinzima’ emuva kwakhe u-Du Plessis uthemba sengathi isimilo sika-Elgar singagqugquzela abanye abashayayo u- Bavuma on esibindi ubheke umsebenzi kuphela - Zulu translation Bavuma no-Morkel bavimba i-follow on ngaphambi kokuthi i-England iqhubekele phambili u-Roland-Jones no-Stokes bahole i-England Singawenza umthelela - u-Rabada u-Cook ugcina ama-seamer ama-Proteas kude ngosuku oluthathanayo